Khayraadka - Mental Health TX
Boggan, waxaad ka heli doontaa ilo kaa caawin doona inaad xog dheeraad ah ka hesho caafimaadka hab-dhaqanka iyada oo loo marayo degello internet oo waxtar leh, tababaro, bandhigyo, iyo hagitaanno kheyraad. Xulo xiriiriye kasta oo hoose si aad wax badan uga ogaato mowduuc gaar ah.
Kuwa la jecelyahay
Jug -jug & PTSD
Xaruntan kheyraadka waxaa loogu talagalay inay kugu qalabeyso aqoonta, ilaha, iyo dareenka rajada mustaqbalka – naftaada ama qof kale oo aad danaynayso.
Fiiri hubkeena eLearning Hub si aad wax badan uga ogaato xaaladaha caafimaadka dabeecadda ee caadiga ah.
Hababka Ogaanshaha Caafimaadka Habdhaqanka
The Guddiga Adeegyada Aadanaha Caafimaadka Texas (HHSC) wuxuu bixiyaa taxane cutub, Wacyi -galinta Caafimaadka Dabeecadda, oo ka hadlaya mawduuc caafimaad maskaxeed ama dabeecad oo ka duwan. Modules -ku waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan astaamaha, daaweynta, soo kabashada, iyo waxyaabo kaloo badan.
Horudhaca Caafimaadka Dabeecadda
Jug -jug iyo PTSD
Wacyi -gelinta iyo Ka -hortagga Is -dilka
Caafimaadka Gabowga iyo Dabeecadda
Dhibaatooyinka Isticmaalka Maandooriyaha
Carqaladeynta Dareenka daran ee Carruurta
Cilmi -nafsiga iyo Schizophrenia
Tababarro ku Saabsan Gargaarka Koowaad ee Caafimaadka Maskaxda (MHFA)
Gargaarka Koowaad ee Caafimaadka Maskaxda waa koorso tababar xirfadeed ku saleysan oo lagu baro kaqeybgalayaasha caafimaadka maskaxda iyo arrimaha isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa jira koorsooyin qaan-gaar ah, dhalinyaro, iyo dhalinyaro oo laga heli karo shaqsi ahaan iyo qaabab muuqaal ah. Maamulayaasha Caafimaadka Maskaxda iyo Caafimaadka Habdhaqanka ee hoos ku taxan waxay MHFA siiyaan shaqaalaha iskuulada madaxa banaan ee degmada (ISD), shaqaalaha hay’adaha tacliinta sare, iyo xubnaha bulshada. Tababbarka MHFA waa u bilaash shaqaalaha ISD iyo shaqaalaha hay’adaha tacliinta sare. Kuwa kale oo dhami waxay la kulmi karaan kharash. Fadlan isticmaal macluumaadka xiriirka hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Si aad u raadsato tababarro kuu dhow ama tababarrada soo socda, fadlan isticmaal Liiska Bixinta Koorsada Gargaarka Koowaad ee Caafimaadka Maskaxda .
Daryeel warwar leh
Daryeelka war-bixintu waa qayb lagama maarmaan u ah taageerada iyo adeegyada caafimaadka maskaxda iyo dabeecadda ee wax-ku-oolka ah Qof kastaa wuu baran karaa waxyeellada naxdinta leh wuxuuna noqon karaa mid xog-ogaal u ah dhaawacyada.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Daryeelka ku-war-qaba Trauma, fadlan booqo:
Shabakada Cadaadiska Dhaawaca Carruurta Qaranka (NCTSN)
Xarunta Waxbarashada NCTSN
Golaha Qaranka ee Caafimaadka Dhaqanka (NCBH)
Xarunta Beddelidda Tiknoolajiyadda Caafimaadka Maskaxda ee Koonfur -Galbeed (MHTTC)
Ilaha Tababarka Daryeelka ee warwarka leh
Ogeysiiska HHS ee Dhaqanka Asturnaanta
Ingiriis: Ogeysiiska Dhaqanka Asturnaanta
Qarsoodinimada Websaytka HHS iyo Bayaanka Amniga
Ingiriis: Qarsoodiga Websaydka iyo Bayaanka Amniga